Yas Island Etihad Arena dia mandray ny kintana Bollywood Arijit Singh
Home » Lahatsoratra farany farany » Entertainment » Yas Island Etihad Arena dia mandray ny kintana Bollywood Arijit Singh
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Entertainment • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana India • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany
Ny fisehoan'ny mpihira malaza an'i Bollywood ao amin'ny Yas Island no ho kaonseritra voalohany ataony ao an-drenivohitra UAE mandritra ny dimy taona.
Ilay mpihira malaza any Bollywood, Arijit Singh, dia hanao fampisehoana ao amin'ny Etihad Arena amin'ny 19 Novambra 2021.
Ity no kaonseritra voalohany an'i Singh any UAE ao anatin'ny 5 taona.
Ny fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana dia hitazomana mandritra ny toerana rehetra.
Yas Island Abu Dhabi, iray amin'ireo tanjona fialamboly voalohany eto an-tany, miaraka amin'ny Departemantan'ny Kolontsaina sy ny fizahan-tany - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), ary ny Portfolio Managing Events (PME), dia handray ny mpihira malaza an'i Arijit Singh. , hiaka-tsehatra ao amin'ny Etihad Arena amin'ny 19 Novambra 2021. Ireo mpankafy an'i Bollywood-kintana dia nahazo traikefa tsy azo lavina tamin'ny faran'ity taona ity.
Iray amin'ireo mpihira marobe indrindra amin'ny vanim-potoana maoderina, ny fisehoan'i Singh ao amin'ny Yas Island no ho kaonseritra voalohany ataony ao an-drenivohitra UAE mandritra ny dimy taona. Hiaka-tsehatra amin'ny sehatra manampahaizana izy Etihad Arena, ny toerana fialamboly lehibe indrindra any Moyen Orient.
Miaraka amina feo mitovy dika amin'ny sinema indianina, ilay mpihira sy mpamoron-kira Bollywood dia hanao hira maro malaza ao aminy, toa an'i 'Tum Hi Ho', 'Kabira', 'Ae Dil Hai Mushkil', ary maro hafa, miaraka amin'ireo mpitendry mozika manerantany manatevin-daharana azy an-tsehatra.
"Ny tanjonay amin'ity taona ity dia ny hamerina am-pilaminana ireo hetsika sy kaonseritra mampientam-po kokoa any an-drenivohitra UAE mba hankafizan'ny mponina sy ny mpitsidika, ary faly izahay mikarakara ity hetsika manokana ity," hoy i HE Ali Hassan Al Shaiba, Tale Mpanatanteraky ny Fizahan-tany sy fivarotana ao amin'ny DCT Abu Dhabi. “Arijit Singh dia mpanakanto kanto izay manintona ny mpihaino azy hatrany amin'ny zava-bitany, izay mahatonga azy ho safidy tsara amin'ny kaonseritra ao amin'ny Etihad Arena ao amin'ny Nosy Yas. Ireo mpankafy tonga manatrika dia afaka mankafy ihany koa ny andiam-panentanana sy ny tolotra misy atsy amin'ny Nosy Yas, manome azy ireo traikefa fialamboly farany mandritra ny fankalazana, sady manome antoka fa ny fiarovana ny mpiasa, ny mponina ary ny mpitsidika no laharam-pahamehana. ”
Ny fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana dia hitazomana mandritra ny toerana rehetra, mifanaraka amin'ny torolàlana rehetra ataon'ny governemanta ankehitriny. Ho fanampin'izany, ny seza pod dia namboarina ho an'ny fianakaviana sy ny namana hankafizany soa aman-tsara ilay kaonseritra raha mifanalavitra amin'ny vondrona hafa manatrika. Ny haben'ny seza ao amin'ny Etihad Arena dia hihena miaraka amin'ny rafitry ny seza pod. Ho fisorohana fanampiny, ny fanakonana tarehy dia takiana amin'ny vahiny rehetra raha tsy rehefa misakafo na misotro amin'ny sezany, araka ny torolàlana avy amin'ny governemanta. Ny vahiny 12 - 16 taona dia mitaky fanandramana PCR ratsy miaraka amin'ny valiny 48 ora. Ny vahiny 16 taona no ho miakatra dia tokony hatao vaksiny feno ary hanolotra ny satan'ny "E" na "*" amin'ny app Al Hosn ary fitsapana PCR ratsy miaraka amin'ny valiny 48 ora.